Yintoni i-Othello Syndrome | IBezzia
Yintoni i-Othello Syndrome?
UMaria Jose Roldan | 29/04/2021 23:31 | Psicología
I-Othello syndrome ibhekisa kumlinganiswa odlalwa ngumbhali oliNgesi uShakespeare. Olu phawu luphawulwa kukubandezeleka komona, kubangela ukuba acinge ngalo lonke ixesha ngokungathembeki komfazi wakhe. Njengoko kulindelwe, umntu ophethwe sesi sifo ubangela ukuba ubudlelwane babo butshabalale kwaye ukuhlala phakathi kwabantu bobabini akunazinzo.
Le yingxaki yokwenyani kuso nasiphi na isibini njengoko ubudlelwane buba yityhefu. Kwinqaku elilandelayo siza kuthetha ngakumbi ngolu hlobo lwesifo kunye nendlela esichaphazela ngayo isibini ngendlela engalunganga.
1 Yintoni i-Othello syndrome ngenxa
2 Iimpawu ze-Othello syndrome
Yintoni i-Othello syndrome ngenxa
Kucacile ukuba umntu ophethwe sisifo i-Othello syndrome unengozi ethile kwinqanaba lengqondo. Ukongeza, kukho uthotho lwezizathu okanye izizathu zokuba abandezeleke ngolu hlobo lomona: ukuzithemba okuphantsi ukuxhomekeka okukhulu ngokweemvakalelo kwiqabane kunye noloyiko olugqithisileyo lokushiywa ngumntu omthandayo kwaye ushiyeke wedwa.
Umntu onolu hlobo lomona unokubandezeleka kuthotho lweengxaki zeentlobo ezahlukeneyo njengokuba kunokuba yimeko yokuphazamiseka okungafunekiyo okanye uhlobo oluthile lokuphazamiseka. Kwelinye icala, kukwakucingwa ukuba umona onjalo unokubangelwa kukusetyenziswa gwenxa kwezinto eziyingozi nezinobungozi emzimbeni njengotywala okanye iziyobisi.
Iimpawu ze-Othello syndrome
Njengoko sele kukhankanyiwe apha ngasentla, umntu onesifo esi sifo unesifo kunye nekhwele elingathandekiyo leqabane lakhe. Olu hlobo lomona luya kuba neempawu ezintathu ezahlukileyo:
Akukho sizathu sokwenyani kutheni kufuneka kuveliswe umona onje.
Ukurhanela okugqithisileyo nokugqithileyo kwiqabane.
Impendulo ayinangqondo kwaphela kwaye intsingiselo.
Ngokubhekisele kwiimpawu zomntu onomona, oku kulandelayo kufuneka kugxininiswe:
Ukulawula gwenxa iqabane lakho. Ucinga ukuba akathembekanga ngalo lonke ixesha kwaye lo nto ibangela ukuba ahlale ethe qwa.
Awuyihloniphi imfihlo yeqabane lakho kunye nendawo. Kufuneka uyazi ngamaxesha onke into eyenziwa liqabane lakho. Oku kunefuthe elibi kubudlelwane babo boluntu.
Ukuthukwa kunye nokukhwaza kukukhanya kwemini. Konke oku kukhokelela kubundlobongela obunokubakho emzimbeni okanye engqondweni.
Akukho gumbi leemvakalelo ezifanelekileyo okanye iimvakalelo. Kuqhelekile ukuba umntu onomona abe nomsindo kwaye acaphukele imini yonke. Akonwabi neqabane lakhe, ekubeni enolwalamano oluxhomekeke kuye.
Ngamafutshane, kubalulekile ukunyanga olu hlobo lwesifo ngokukhawuleza. Umntu onomona ufuna uncedo lwengcali, ukumnceda ukuba abone ukuba akunakuba nolwalamano nomnye umntu ngendlela eyityhefu. Ukuba umntu akavumeli ukuba anyangwe okanye akakwazi ukoyisa ingxaki yomona, ubudlelwane buya kuphumelela. Ubudlelwane kufuneka busekwe kwimbeko kunye nokuthembela okupheleleyo kubo bobabini abantu. Umona wesifo awunakuvunyelwa kubudlelwane, kuba uya kugqibela ngokuwutshabalalisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Psicología » Yintoni i-Othello Syndrome?
Iimaski zeenwele ezi-6 zale ntwasahlobo